Uncategorized Archives - Neo Mars International
Neo Mars International
March 16, 2022 March 16, 2022 by Neo Mars Internationalin UncategorizedLeaveaComment on ချောကလက် ယောကန်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့ ဗာလင်တိုင်းနေ့နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အသည်းပုံ “ချောကလက် ယောကန်”မုန့်ကို လုပ်ရအောင်။ ယောကန်ဆိုတာ ဂျပန်မုန့်တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကျောက်ကျောလို မုန့်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သာမန်အားဖြင့် အချိုပြုတ်ထားတဲ့ ပဲကို ကျောက်ကျောနဲ့ ခဲအောင် လုပ်ကြပေမဲ့ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချောကလက် အရသာနဲ့ ယောကန်ဖြစ်ပြီး ဂျုံမှုန့်ကိုထည့် ရေနွေးငွေ့နဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်ပါမယ်။
. ကိုကိုးအမှုန့် စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
. သကြား စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
. ထောပတ် ၁၅ ဂရမ်
. အလွယ်ဖျော် ကော်ဖီမှုန့်
လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
. ရေနွေးပူ စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
. နွားနို့ ၁၀၀ မီလီလီတာ
. ဂျုံမှုန့် စားပွဲဇွန်း ၅ ဇွန်း
. တန်ဆာဆင်ရန် ကိုကိုးအမှုန့် အနည်းငယ်
1.ကိုကိုးအမှုန့်နဲ့ သကြားကို ဇလုံထဲထည့်ပြီး ကောင်းကောင်းရောပါ။ အလွယ်သုံး ကော်ဖီမှုန့်ကို ရေနွေးပူနဲ့ ဖျော်ထားပါ။
2.အကြော်အိုးထဲမှာ ထောပတ်ကို ထည့်ပြီး မီးပျော့ပျော့နဲ့ အရည်ဖျော်ပါ။ ထောပတ် ပျော်ပြီဆိုရင် မီးကိုပိတ်လိုက်ပါ။ အဲဒီ ထောပတ်အရည်ထဲကို ကိုကိုးအမှုန့်နဲ့သကြား ရောထားတာကိုထည့်ပြီး မွှေပါ။ ကော်ဖီအရည်ကိုလည်း ထည့်ပြီး မီးနဲ့ အပူပေးပါ။ ချောမွေ့သွားပြီဆိုရင် မီးကို ပိတ်လိုက်ပါ။ ချောကလက် ရပါပြီ။
3.ချောကလက်အရည်ထဲကို နွားနို့အေးအေးကိုထည့်ပါ။ သမအောင်မွှေပြီးရင် ဇလုံထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ဂျုံမှုန့်ထဲကို ၃ကြိမ်ခွဲပြီး ထည့်ရင်း မွှေပါ။ မွှေပြီးရင် ဆန်ခါနဲ့ ထပ်ပြီးစစ်ပါ။ ယောကန် အရည် ရပါပြီ။
4.၁၄စင်တီမီတာ ပတ်လည်ရှိတဲ့ အပူခံတဲ့ (ဖန်)ခွက် ဒါမှမဟုတ် သတ္တုပုံစံခွက်ထဲမှာ မီးဖိုချောင်သုံး ပလတ်စတစ် အပြားကိုခင်းပြီး မျက်နှာပြင်ကို ရေစွတ်ပါ။ အဲဒီအပေါ်ကနေ ယောကန်အရည်တွေကို လောင်းထည့်ပါ။
5.ပေါင်းအိုးကို ရေဆူအောင်တည်ပြီး ယောကန်ထည့်ထားတဲ့ ခွက်ကို ထည့်ပြီး အဝတ်စခံပြီး အဖုံးကိုအုပ်ပါ။ ရေနွေးငွေ့တွေလျှံထွက်လာရင် မီးပျော့ပျော့ဖြစ်အောင် လျော့လိုက်ပြီး ၁၅မိနစ်ကနေ ၂၀မိနစ် ပေါင်းပါ။ အရည်ကို တုတ်ချွန်နဲ့ ထိုးကြည့်ပြီး တုတ်မှာ မုန့်သားကပ်ပါမလာတော့ဘူးဆိုရင် မီးကို ပိတ်လိုက်ပါ။ ပေါင်းအိုးက ထုတ်ယူလိုက်တဲ့ ယောကန်ပေါ်မှာ ပလတ်စတစ်ပြားအုပ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ နာရီဝက်လောက် အအေးခံပါ။
6.အေးသွားရင် အသည်းပုံ မုန့်လှီးတဲ့ ပုံစံခွေမှာ ကိုကိုးအမှုန့်ကို ဖြူးလိုက်ပြီး ယောကန်ကို ဖြတ်ထုတ်ယူပါ။ ရလာတဲ့ ယောကန်တွေကို ဗန်းထဲထည့်ပြီး အပေါ်က ကိုကိုးအမှုန့်ဖြူးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
ခါရေးအုဒုန်းခေါက်ဆွဲ (Curry Udon)
July 30, 2021 July 30, 2021 by adminin Uncategorized
ဒီအစီအစဉ်ကနေ ခါရေးကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအကြား ရေပန်းစားတဲ့ အစားအစာတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ခါရေးအုဒုန်း ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်မလဲ ဆိုတာကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခါရေးအုဒုန်း (Curry Udon) ဆိုတာက ခါရေး (Curry) ဟင်းအနံ့အရသာထည့်ထားတဲ့ အုဒုန်းခေါက်ဆွဲ ပါ။ အုမာမိ အရသာပါပြီးသား ခါရေးအနှစ် ကိုသုံးပြီး ချက်ပြုတ်ပါမယ်။
ကြက်သွန်နီ တစ်ခြမ်း (သို့) ၁၂၀ ဂရမ်
မုန်လာဥနီ တစ်ပိုင်း (သို့) ၆၀ ဂရမ်
ရှိအိတာကဲ မှို ၂ ပွင့်
ဂျပန်ကြက်သွန်မြိတ် ၄ ပုံ ၁ ပုံ
ခါဆုအိုဘူရှိ ဒါမှမဟုတ် ဘိုနီတို ငါးခြောက်အဖတ် ၃၀ ဂရမ် (သို့) ၁ ကျပ်သားကျော်ကျော်
ရေ ၁၄၀၀ မီလီလီတာ (သို့) ရေ နို့ဆီဘူး ၅ လုံးကျော်ကျော်
ရှောယုဂျပန်ပဲငံပြာရည် စားပွဲဇွန်း ၄ဇွန်း
ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ခါရေးအမှုန့် စားပွဲဇွန်း တစ်ဝက်
ခါတာ့ခုရိခို အာလူးကော်မှုန့် စားပွဲဇွန်း ၃ဇွန်း
ပြုတ်ပြီးသား အုဒုန်း ခေါက်ဆွဲ ၆၀၀ ဂရမ် (သို့) ၃၆ ကျပ်သား
ပထမဆုံး ဒါရှိ အရသာရည်ကို လုပ်ပါမယ်။ အိုးတစ်လုံးထဲ ရေထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါ။ ရေဆူလာရင် ဘိုနီတို ငါးခြောက်အဖတ်ကို အိုးထဲထည့်ပြီး ၂မိနစ် ပြုတ်ပါ။ ပြီးရင် ဇကာနဲ့ ငါးခြောက်ဖတ်တွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး ဒါရှိအရသာရည်ကို သီးခြား အိုး ဒါမှမဟုတ် ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးထဲ လောင်းထည့်ထားပါ။
ကြက်သွန်နီကို သူ့အမြှောင်းအတိုင်း အလျားလိုက် ပါးပါးလှီးပါ။ မုန်လာဥနီကို ဗြက် ၁စင်တီမီတာနဲ့ အရှည် ၄စင်တီမီတာအရွယ် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံစံ ပါးပါးလှီးဖြတ်ပါ။ ရှိအိတာကဲ မှိုရဲ့ ရိုးတံကို ပါးပါးလှီးပါ။ ဂျပန်ကြက်သွန်မြိတ်ကို ထောင့်ဖြတ်အတိုင်း ပါးပါးလှီးထားပါ။
ခါရေးအမှုန့်ကို ရေ စားပွဲဇွန်း ၁ဇွန်းထည့်ပြီး ရောမွှေပါ။ အာလူးကော်မှုန့်ကိုတော့ ရေ စားပွဲဇွန်း ၃ဇွန်းထည့်ပြီး နှံ့စပ်အောင် သေသေချာချာ မွှေပေးပါ။
လတ်ဆတ်တဲ့ ဒါရှိအရသာရည် ချက်ဖို့ သကြား၊ ဂျပန်ရှောယုပဲငံပြာရည်နဲ့ ဆားကို ထည့်ပါမယ်။ ကြက်သွန်မြိတ်က လွဲပြီး ကျန်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အားလုံးကိုအိုးထဲထည့်ပြီး အိုးကို မီးအပူစပေးပါမယ်။ ဟင်းချို ဆူလာတဲ့အခါ နောက်ထပ် ၅မိနစ် ဆက်တည်ရပါမယ်။ ဟင်းချိုချက်နေတဲ့အချိန်မှာ တက်လာတဲ့ အမြှုပ်လေးတွေကို ခပ်ထုတ်ပေးပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ကျက်သွားလောက်ချိန်မှာ ရေနဲ့ဖျော်ထားတဲ့ ခါရေးအနှစ်ကို ထည့်ပါ။ အဲဒီနောက် ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်တွေကိုထည့်ပြီး မီးပိတ်လိုက်ပါ။
အာလူးကော်မှုန့်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြီး သေသေချာချာ မွှေပါမယ်။ ဟင်းချိုရည်ကို ယောက်ချိုနဲ့မွှေနေတုန်းမှာ အဲဒီအာလူးကော်မှုန့်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
မီးပြန်ပေးပြီး ဟင်းချိုရည်ကို ဆက်မွှေပေးပါ။ ဟင်းချိုရည် ဆူပွက်လာရင် ပြုတ်ပြီးသား အုဒုန်းခေါက်ဆွဲကို ထည့်ပါမယ်။ ဟင်းချိုထပ်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ မီးပိတ်လို့ရပါပြီ။
ဒုံဘူရီ ဒါမှမဟုတ် ပန်းကန်လုံးအကြီးထဲမှာ အုဒုန်းခေါက်ဆွဲဖတ်ကိုထည့်ပြီး အပေါ်က ဟင်းချိုရည်နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ထည့်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Neo Mars International is dedicated to providing cultural intelligence about Japan, including Language, Lifestyle, News, etc. to Myanmar.
Style isathing for Neo Mars International.
Neo Mars International © 2022. All Rights Reserved.